Breakthrough to Success-B2S Level2(NLP for Leaders) at Yangon | Yangon
Breakthrough to Success-B2S Level2(NLP for Leaders) at Yangon
Time Thu Jul 19 2018 at 08:30 am to Sat Jul 21 2018 at 08:00 pm
Venue Rose Garden Hotel - Yangon, 171, Upper Pansodan Street, Yangon, 11221, Yangon, Burma
Created by Myanmar Excellence Institute Follow Contact Promote Your Event
✅ တိမ်မြှုပ်ပျောက်ကွယ်လုဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာ စကားကြီး (၁၀) ခွန်းကို အသေးစိတ် နားလည် အသုံးချလို ပါ သလား ❓❓❓
✅ မြန်မာ စကားကြီး (၁၀) ခွန်းနှင့်တကွ NLP (Neuro Linguistics Programming) စကားပြောခြင်း အတတ်ပညာ (၁၈) ရပ် ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးချလိုပါသလား ❓
✅ သင့်ရဲ့ Leadership Skills ကို နောက်တဆင့်မြှင့်လိုပါ သလား ❓
✅ စီမံခန့်ခွဲမှု Skills တွေကို ယခုထက်ပိုပြီး တိုးတက်လိုပါသလား ❓
✅ ယခုပဲ MEI နှင့်ဆက်သွယ်ပြီး NLP in LEADERSHIP သင်တန်းကိုအပ်နှံလိုက်ပါ ?
☎ ☎ - 09 4018 66838
☎ ☎ - 09 76318 3167
☎ ☎ - 09 79 555 1041
☎ ☎ - 09 7636 19300
1 ⃣ ရေကူးညာတင်စကား
“မိမိလိုရာရောက်အောင်ကြိုတင်၍ စကားပိုဖြင့် ပြောဆိုခြင်း”
2 ⃣ ကောက်ပင်ရိတ်လှီးစကား
ကောက်ပင်ကို လက်တစ်ဘက်ဖြင့် မြဲမြံစွာဆုပ်၍တံစဉ်ဖြင့်အရင်းကရိတ်ဖြတ်လျှင်လက်တွင်ရှိသမျှစပါးကိုရသကဲ့သို့
“သူဆိုသောစကား မိအောင် ဖမ်းကိုင်ပြီးမှ ပြတ်စဲအောင်ပြောဆိုခြင်း”
3 ⃣ ရေစီးဖေါင်ဆန်စကား
လိုအင်ဆန္ဒ ရှိသမျှသောအရာဝတ်္ထုတို့ကို ဖေါင်တွင်တင်၍ဖြည်းညှင်းစွာဆန်တက် သွားလျှင် လိုအင်ကိစ်္စပြီးသကဲ့သို့ “ခြေသိမ်း ခေါင်းပိုက် ပမာ ဟပ်စပ်၍ ပြီးပြတ်အောင်ပြောဆိုခြင်း”
4 ⃣ အိုးတန်ဆန်ခတ်စကား
အိုးနှင့်ဆန် တန်ရုံထည့်၍ချက်လျှင် ကောင်းစွာကျက်နပ်သကဲ့သို့
5 ⃣ ဆီပွတ်ကျည်ပွေ့စကား
ကျည်ပွေ့ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ်ဆီပွတ်လျှင် ဆီထွက်၍ မိမိလိုဘတ်ကိစ္စပြီးသကဲ့သို့
6 ⃣ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်စကား
ဆင်ထိုးဝှေ့မည်လိုက်လျှင် တိမ်းရှောင်ဖယ်သွေလွတ်ရာ၌ပြေးလွှဲကာနေရသကဲ့သို့ “ကိုယ့်ထံသို့ရောက်မည့်စကားကို ရှောင်လွှဲ၍ပြောဆိုခြင်း”
7 ⃣ တောင်သူယာခုတ်စကား
တောင်သူလယ်သမားတို့သည် မိမိတို့တည်ခုတ်မည့် လယ်ယာမြေကွက်၌ရှေးဦးစွာခြုံပိတ်ပေါင်းနွယ် သစ်ပင်ငယ်တို့ကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးမှသာ သစ်ပင်ကြီး တို့ကို ခုတ်ထွင်ဖိလှဲသကဲ့သို့
8 ⃣ ကြက်ဆုတ် ခွပ်ပစ်စကား
“သူ့စကားအလိုသို့ လိုက်တန်ကလိုက်၍ စီးသာမှစီးလျက် ပြီးပြတ်အောင်ပြောဆိုခြင်း”
9 ⃣ ရေစစ်ပမာစကား
ဓမ္မကရိုဏ်ခေါ် ရေစစ်ကိုရေတွင်နှစ်ကာ ပြည့်မှအပေါက်ကို ပိတ်၍ဆွဲယူလိုက်လျှင် ရေမထွက်နိုင်သကဲ့သို့ “သူတစ်ပါးပြောဆိုခွင့်မရအောင် ပိတ်ဆို့၍ပြောဆိုခြင်း”
? ခက်တင် မောင်းနင်းစကား
မောင်းနင်းသောသူသည် တစ်ဘက်လိုက်ပါတိမ်းစောင်းလွန်းလျှင် အတင်ခက်၍ မတိမ်းမစောင်းနင်းရသကဲ့သို့ “ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မတင်မကျပြောဆိုခြင်း”
အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း အိမ်ထောင်တစ်ခု၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အောင်မြင်မှု၊ ကျဆုံးမှုတိုင်းသည် ခေါင်းဆောင်နှင့်သာ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှု ရှိပါသည်။ အောင်မြင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်လိုတွေးသလဲ? သူတို့ ဘယ်လိုပြောဆို ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံသလဲ? အစရှိသည့် အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရလဒ်တွေ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။
စကားပြောဆိုရာတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် (၂) မျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို ပြောနေသော စကား နှင့် သူတပါးကို ပြောဆိုနေသောစကား ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း ထိုစကားပြောဆိုခြင်း (၂) ခု လုံးသည် မိမိတို့၏ ဘဝတွင် လွန်စွာအရေးကြီးလှပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အရေးကြီးလှသောကြောင့် ရှေးပညာရှိတို့က "စကားကြီး ဆယ်မျိုး" ဟူ၍ ရေးသားပြုစုခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
အဲဒါဆိုရင် ထိုစကားပြောဆိုခြင်း (၂) ခု လုံးကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ် မလဲ ❓❓
ယခု သင်တန်းတွင် ရှေးပညာရှိတို့ ရေးသားပြုစု ခဲ့သော "စကားကြီး ဆယ်မျိုး" ကဲ့သို့ ပြောဆို ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးတွင် လွန်စွာမှ အရေးပါ/အသုံးဝင်လှသည့် များနှင့် အခြား ထူးခြားကောင်းမွန်သော နည်းပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အောင်မြင်တိုးတက်လိုသော လူတိုင်း တက်ရောက်သင့် သော သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
✅ CreateaNEW Powerful Identity for yourself
✅ Learn Language Patterns of Influence
✅ Learn how to Make your words Irresistible
✅ Change People's Perceptions & Mindsets
✅ Breakthrough your Fears & Phobias
✅ BeaMaster of your Emotions
✅ Activate Powerful States
✅ Entrepreneurs များ
✅ Business လုပ်ငန်းရှင်များ
✅ HR / Admin Manager များ
✅ CEO of the companies
✅ လုပ်ငန်းတွင် ရာထူးကြီးကြီး ရလိုသူများ
✅ အနာဂတ်တွင် ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်လိုသူ များ
✅ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ
✅ Professional & Personal Life မှာ အောင်မြင်လိုသူများ
✅ Coaching (Executive, Sport, Entertainment etc.) ဖြင့် အသက်မွေးလိုသူများ
✅ ဘ၀မှာ လက်ရှိ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေပြီး ထပ်ဆင့်အောင်မြင် ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀ကို ရရှိလိုသူများ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
NLP ကို နိုင်ငံတကာမှာ အောင်မြင် ကျော်ကြားနေသော
? ခေါင်းဆောင်များ (President Obama, Former President Bill Clinton )
? နာမည်ကြီးစာရေး ဆရာများ
? Trainer & Speaker များ (e.g. Anthony Robbin)
? Celebrities များ (e.g. Princess Diana, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Hugh
Jackman, Serena Williams, Andre Agassi, Usher, Maria Menounos, Derek Hough) တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုကြပါတယ်။
MEI NLP Practitioner သင်တန်းကို တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ
☑သင်အမှန်တကယ် လိုချင်သော အနာဂတ်ကို ဖန်တီးလာနိုင်ခြင်း
☑ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝ ရှိလာခြင်း
☑ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးများ မြင့်တက်လာနိုင်ခြင်း
☑ လက်ရှိထက် ပိုမိုအောင်မြင် ပျော်ရွှင်သောဘဝ ကို ဖန်တီးလာနိုင်ခြင်း
☑ မိမိဘဝ အတွက်အမှန်တကယ်အရေးပါသော အရာများ ရှာဖွေနိုင်ခြင်း
☑ မိမိအတွက်အရေးပါသော ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းမှ လူများနှင့် အဆင်ပြေစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ခြင်း
☑ NLP Techniques များကို အရောင်းလုပ်ငန်းနှင့် လူမှုဆက်ဆံရေးအပါအဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
☑မကောင်းသော စိတ်ခံစားမှုများ၊ ယုံကြည်ချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ခြင်း၊
☑ မိမိဘဝ/စီးပွါးရေးအတွက် မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များအား ခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်နိုင်ခြင်း
☑ အမြဲတန်း စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုကို ရယူနိုင်ခြင်းနှင့် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်း (Self and Others)
☑ Personal / Professional Coach အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်ခြင်း
☑ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Certificates (4 International Certificates) များကို ရရှိနိုင်ခြင်း
MEI NLP Practitioner Certification Course (4 International Certifications – One Amazing Experience) သင်တန်းအားလုံးပြီးဆုံးသွားပါက နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Certificate (၄) ခု ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2. Time Line Therapy Practitioner Certification
(လက်မှတ်ရသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို The American Board of NLP, The Time Line Therapy Association နှင့် The American Board of Hypnosis တို့မှ အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။)
Breakthrough to SUCCESS (B2S) Level 2
***3Intensive Days***
Upcoming Class in Yangon
? ? နေ့ရက် ။ ။ 19 - 20 – 21 July 2018
⏰ ⏰ အချိန် ။ ။ နံနက် (၉) နာရီ မှ ညနေ (၇) နာရီ အထိ
?? နေရာ ။ ။ Rose Garden Hotel
Normal price : ကျပ်(၆) သိန်း
Special Promotion : ကျပ် (၃) သိန်း (၅) သောင်းကျပ်သာ
(ပထမဆုံး သင်တန်းအပ်နှံသော အယောက်(၂၀) အတွက်သာ)
Live with Passion ?
? Asia's Top Success Coach
? 1st NLP Trainer from Myanmar
? 1st NLP Coach Trainer from Myanmar
? Executive Director at John Maxwell Team
? Certified John Maxwell Coach,Trainer & Speaker
? 1st Hypnotherapy Trainer from Myanmar
? 1st Time Line Therapy® Trainer from Myanmar (ABNLP & ABH)
? 1st TetraMap Facilitator From Myanmar
You may also like the following events from Myanmar Excellence Institute:
Next Friday, 24th August, 09:00 am, NLP Practitioner4Certifications (Batch-3) in Yangon
Next month, 1st September, 09:00 am, Unleash Your Leadership Potential - ULP in Yangon in Yangon
Also check out other Workshops in Yangon, Business Events in Yangon, Sports Events in Yangon.
Map Rose Garden Hotel - Yangon, 171, Upper Pansodan Street, Yangon, 11221, Yangon, Burma
ဖုန်းပြုပြင်နည်းသင်တန်း ခိုင်မာသောအလုပ်အကိုင် 09 25 4040 200
Career Conversation : UX Designer & Design Film Meetup
Australian Education Exhibition, Yangon
EDM : We Are Connected